Mhirizhonga Yotadzisa Kuvhurwa kweZvimwe Zvikoro
Zvikoro zvizhinji zvinonzi zvatadza kuvhurwa neChipiri, mushure mekunge vamwe varairidzi vatya kudzokera kuzvikoro vachitya mhirizhonga iri kuitika munzvimbo dzavanodzidzisira.
Vechidiki veZanu PF, mauto pamwe nevanozviti vakarwa hondo yerusununguko, vari kushungurudza varairidzi munzvimbo dzakasiyana siyana. VeZanu PF ava vanonziwo vakaisa makamba avo ekushungurudzira vanhu pane zvimwe zvikoro, uye vave kutoshandisa dzimba, midziyo pamwe nechikafu nezvimwe zvinhu zvevarairidzi vari kutiza kana kutya kudzokera kumabasa.
Vamwewo varairidzi vanonzi vatadza kudzokera kumabasa nezvikonzero zvekushaiwa mari dzekufambisa, sezvo mari dzavari kutambira dziri shoma zvikuru.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti ranyorera hurumende tsamba richida kuti hupenyu hwevarairidzi huchengetedzwe. Sangano iri ratiwo riri kuda kuti varairidzi vatambire mari dzemihoro dzinotangira pa$18 billion pamwedzi, sezvo mari dzavari kutambira dzisisina zvadzinobatsira.
Munyori mukuru wePTUZ, VaRaymond Majongwe, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti kana varairidzi vakaramba vachishungurudzwa, masangano ose anomirira varairidzi achabatana mukudzivirira varairidzi.
Ukuwo mutungamiri weZIMTA, Amai Tendai Chikowore, vatiwo sangano ravo harisati ratambaira zvichemo zvekushungurudzwa kwevarairidzi, vakati asi vari kungonzwa kuti izvi zviri kuitika. Vati sangano ravo riri kukurudzira varairidzi kuti vanyore matsamba vachizivisa hurumende pamwe nemasangano avo nezvinenge zvaitika kwavari.